Daawo Sawirada :Qarax loo adeegsaday Gaari waxyaabaha Qarxa laga soo buuxiyay oo ka dhacay Muqdisho. - jornalizem
Daawo Sawirada :Qarax loo adeegsaday Gaari waxyaabaha Qarxa laga soo buuxiyay oo ka dhacay Muqdisho.
Waxaa Faah Faahino dheeraad ah kasoo baxayaan Qarax saakay ka dhacay Isgooska Sanca ee Magaalada Muqdisho kaa oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Gaarigan qarxay ayaa la tilmaamay in uu lahaa Qasnajiga Wasaarada howlaha guud iyo guriyeynta xukuumada Somalia oo lagu Magacaabo Jabriil Maxamuud Iimaan kaa oo la doonayay in qaraxaasi lagu qaarijiyo.
Qaraxa xiliga uu dhacayay ayaa la tilmaamay in uu saarnaa gaariga masuulkan Dowlada katirsan uuna kasoo gaaray dhaawac aad u fudud inkastoo uu ku dhintay ruux kale oo gaariga xiligaasi la saarnaa.
“Gaarigu oo noociisu ahaa Garib waxaa watay khasnajiga wasaarada howlaha guud ee guriyeynta Jabriil Maxamuud Iimaan oo ka yimid gurigiisa oo ku yaala degaanka Siisii ee degmada Yaaqshiid, waxaana isagoo ku soo jeeda xarunta wasaarada uu gaariga kula qarxay isgoyska Sanca” sidaa waxaa yiri masuul ka tirsan wasaaradaas oo goor dhow la hadlay Warbaahinta.
Wararku waxay sheegayaan in Jabriil Maxamuud Iimaan uu ka dhaawac fudud oo gubniin ah ka soo gaaray wejiga iyo meelo kale oo jirkiisa ka mid ah, hase ahaatee uu qaraxaas ku geeriyooday nin ay saaxiibo ahaayeen oo gaariga la saarnaa.
Qaraxan ayaa sidoo kale waxa dhaawacyo uu kasoo gaaray ilaa 4-qof oo rayid ah oo ka agdhawaa goobta uu qaraxu ka dhacay , iyadoona sidoo kale qaraxu sababay bur bur baalayaal goobtaasi ku yaalay iyo goobo ganacsi.
Masuuliyiinta goobta ka hadashay ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi uu ahaa mid ay fuliyeen dagaalamayasha Shabaab ee caadada ka dhigtaay weerarada joogtada ah ee bishaan Hareeyay Caasimada kadib markii ay ku goodiyeen in bishaan ay dhiig badan daadi doonaan.
Dadka wax ku noqday weerarka Sanca ka dhacay ee gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay loo adeegsaday ayaa waxaa la sheegay in ay u badnaayeen dad shacab ah lamana sheegin wali cid loo qabtay ku lug lahaanshaha weerarkaasi hasa yeeshee wariyaal goobta gaaray ayaa waxa ay ku warameen in uu jiro baaritaan ciidamada amaanku ay halkaasi ka sameeyeen kadib markii uu qaruxu dhacay.